၂၁ ရာစု ပင်လုံရလဒ်နှင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံတို့အကြား ခြားနားနေသော မူဝါဒများ
လူဦးရေငါးသန်းအား 4G ကွန်ရက်ဖြင့် လွှမ်းခြုံနိုင်ပြီဟု အူရီဒူးက ကြေညာ
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၁ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ မြို့နယ် ၅၂ မြို့နယ်ရှိ လူဦးရေ ငါးသန်းအား အူရီဒူး 4G/LTE ကွန်ရက်ဖြင့် လွှမ်းခြုံထားနိုင်ပြီဖြစ်သည်ဟု အူရီဒူးမြန်မာက ယနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော 4G ကွန်ရက်ကို ၂၁၀၀ MHz လှိုင်းနှုန်းစဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊.
မျိုးချစ်အမည်ခံ လှုပ်ရှားသူများကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် တရားရုံးရှေ့၌ ပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြ၊ ဆန္ဒပြပွဲများ ဆက်လုပ်ရန်စီစဉ်
အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ထိန်းသိမ်းခံထားရကာ အမှုရင်ဆိုင်နေရသည့် မျိုးချစ်အမည်ခံ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် ၎င်းတို့ကို ထောက်ခံသူများက ကမာရွတ်တရားရုံးရှေ့၌ ယနေ့ ပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ပြဿနာက ငွေလဲနှုန်းမဟုတ်၊ ငွေဖောင်းပွမှုသာ အဓိကဖြစ်သည်
ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုသာ အာရုံထားနေပြီး ကြိုးနီစနစ် ဖြေရှင်းနည်းများသာ ကျင့်သုံးနေပါက ပြောင်းလဲမှုများ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာရုံသာ ရှိလိမ့်မည်။
Min Thu Maung ရေးသားသည်။
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံကနေ ဘာတွေ သင်ယူနိုင်မလဲ
Frontier နှင့် John Paul Lederach, Stephen Gray and Madhav Joshi ရေးသားသည်။
မြန်မာပလာဇာ အပိုင်း-၂ တွင် Ocean Supercenter ပါဝင်လာမည်
ရန်ကုန်၊ မေ ၃၁ ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင် ဆက်လက်တည်ဆောက်နေသည့် မြန်မာပလာဇာ စီမံကိန်း အပိုင်း-၂ တွင် အဆင့်မြင့်ဟိုက်ပါ မားကတ်တစ်ခု ထူထောင်သွားရန် ဗီယက်နမ်မှ HAGL မြန်မာနှင့် City Mart Holdings တို့ သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ Ocean Supercentre အမည်ဖြင့် ဟိုက်ပါမားကတ်အား ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်.
မြန်မာနိုင်ငံ၌ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ကုလက အဖွဲ့ဖွဲ့
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များအပေါ် ရက်စက်မှုများ ကျူးလွန်နေသည်ဟု စွပ်စွဲမှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် သုံးဦးပါအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက မေ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ခန့်အပ်လိုက်သည်
အရပ်ဝတ်များအား တပ်မတော်သားများက ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပြုမူနေမှုကို တပ်မတော်က စိစစ်နေ
လူမှုကွန်ရက်တွင် ပြန့်နှံ့နေသည့် အရပ်ဝတ် အမျိုးသားလေးဦးအား တပ်မတော်သားများက ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပြုမှုနေမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိစစ်လျက်ရှိသည်ဟု တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှ ကျူးကျော်ဟုဆိုသူများကို ဖယ်ရှားရန် အစိုးရက ပြင်ဆင်နေ
လက်ရှိနေရာမှ မေ ၂၈ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ဖယ်ရှားပေးရန် ၎င်းနေထိုင်သူများအား အသိပေးသည့်စာကို မေလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။